Izindlela ezinhle zokuthumela amafayela wombhalo bese wabelana kusuka ku-Mac yakho uye kwamanye amadivayisi | Izindaba zamagajethi
Izindlela ezinhle zokuthumela amafayela wombhalo bese wabelana kusuka ku-Mac yakho uye kwamanye amadivayisi
Umbulali Uviniga | | Android, Software, Windows
Enye yezindlela ezivame kakhulu ukuthumela amafayela noma umbhalo ungaphezu kwezithunywa ezivela imeyili noma osheshayo. Sisanda kubona ikhambi elingaziwa le- I-Volafile futhi namhlanje sizobona enye indlela. Izithunywa zihle kakhulu uma uthumela umbhalo kothile ngaphandle kwakho, kepha uma ubadinga ukuthi bawuthumele kuwe noma kolunye uhlelo ongahle ulusebenzise, ​​isithunywa kungenzeka singabi yindlela engcono kakhulu. Uma kukhulunywa ngokuthumela amafayela kuwe, cishe njalo uwathumela nge-imeyili. Kuzo zombili lezi zimo, uthumela ama-imeyili amafayela, njengoba ewafuna kohlelo oluhlukile, kepha sifeza lokho ngemali yokuhlanganisa ibhokisi lokungenayo le-imeyili. Nazi ezinye izindlela ongathumela ngazo amafayela nombhalo kusuka ku-Mac kunoma iyiphi idivayisi, isb. I-Android, i-iPhone, i-iPad, enye iMac noma iWindows PC.
Thumela umbhalo kusuka ku-Mac uye kudivayisi ye-iOS
Ukuthumela imiyalezo evela ku-Mac kuya ku-iPhone yakho noma i-iPad kube lula kakhulu, ngenxa yemiyalezo ezoqala ukukhonjiswa engonyameni yasentabeni, kepha iyatholakala ngeNgonyama kulabo abazimisele ukuzama inguqulo ye-beta. Ukuthumela amafayela wombhalo nezithombe (amafayela wesithombe kuphela - awahambisani nezinye izinhlobo zamafayela), okumele ukwenze nje ukuzithumela umyalezo. I-Mac nedivayisi ye-IOS akudingeki ukuthi zixhunywe kunethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi, kepha womabili amadivayisi kumele abe nokuxhumeka kwe-Intanethi. Ukuthumela imiyalezo noma ifayela lesithombe, vula imiyalezo, wakhe umlayezo omusha, faka i-ID yakho ye-Apple. Thumela umyalezo futhi uzowuthola kudivayisi yakho ye-iOS. Yize umyalezo uzovela kabili ezinhlangothini zombili, uthunyelwe futhi wamukelwe, kepha noma kunjalo, uzoba khona.
Thumela amafayela kusuka ku-Mac kuya kumadivayisi we-iOS
Ukuthumela amafayela kusuka ku-Mac yakho kuya ku-iPad yakho noma i-iPhone, uzobhekana nohlobo oluthile lwemikhawulo, lapho womabili amadivayisi kufanele abe kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi. Sebenzisa izinhlelo zokusebenza ezimbalwa, ezibizwa nge-Deliver for Mac ne-Deliver Bubbles ze-iOS (zombili ezimahhala ngokuphelele), bese uqala ukuthumela amafayela. Ukudluliswa kwamafayela kungahamba kancane, kepha kungathunyelwa komunye nomunye futhi uhlelo lokusebenza luthembekile. Ngokwengeziwe, iphasiwedi ungayivikela ngokudluliswa kwefayela ukuqinisekisa ukuthi akekho omunye umuntu ongayithumela kusistimu yakho noma kudivayisi.
Thumela amafayela kusuka ku-Mac kuya ku-Mac noma ku-Windows PC
Esinye sezizathu eziningi zokuthi ukwabelana ngefayela kube buhlungu ngoba akuwona wonke umuntu osebenzisa ipulatifomu efanayo, amanye afana nama-Macs, kanti amanye asebenzisa ama-Windows PC. Amanye amazwe angaba nokuhlanganiswa kwama-Mac nama-Windows PC. Uma usesimweni lapho kufanele usebenze khona womabili amapulatifomu futhi udinga indlela elula nephumelelayo yokuthumela nokubhala amafayela, impendulo yakho ilele ezinsizakalweni ezimbili ezinkulu zewebhu ezitholakala kuwo womabili amapulatifomu, i-Evernote neDropbox.
Faka i-Evernote ngawo womabili ama-Mac ne-PC ofuna ukushintshanisa amafayela phakathi kwawo. Dala incwadi yokubhalela ehloselwe ukushintshanisa umbhalo, bese wenza amanothi isikhathi ngasinye lapho uthumela umbhalo. Finyelela kuzo kusuka kwenye i-Mac yakho noma iWindows PC kusuka kuhlelo lokusebenza lwesitoko.
Ngokuthumela amafayela phakathi kwezinhlelo ezimbili, iDropbox iyindlela enhle yeklayenti lakho ledeskithophu elenza ukuthi ukuthumela amafayela kube lula kuphela, kepha futhi kukwazisa uma usuthole ifayela elisha. Ngokungafani nokusetshenziswa kwayo kokugcina, ungasebenzisa iDropbox njengesango eliphakathi kwezinhlelo ezimbili. Uma uhlelo ofuna ukuthumela kulo amafayela kungelona olwakho, futhi kamuva lungalungiselelwe nge-ID yakho yeDropbox, cabanga ukudala ifolda eyabiwe nomuntu ofuna ukuthumela amafayela kuye bese ungeza amafayela kuwo. Ukulayisha nokulanda amafayela kuzothatha isikhathi, noma kunjalo, kuya ngejubane lokuxhumeka kwakho kwi-Intanethi.
Isixazululo Somhlaba Wonke Sombhalo Okwabelwana Ngawo Phakathi Kwamadivayisi Amabili
Uma ukhetha ukusebenzisa indlela eyodwa ukuxhumana nanoma iyiphi idivayisi uma usebenzisa iMac, Isiqeshana.Share iyisevisi enhle kakhulu enezinhlelo zokusebenza ze-Mac, iWindows, i-iOS ne-Android. Ungasebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu seClip.Share noma usebenzise izinhlelo zokusebenza ukushintshanisa izingcezu zombhalo kalula. Sicela wazi ukuthi i-akhawunti iyadingeka Gmail o Izinhlelo zokusebenza ze-Google ukuthumela imiyalezo phakathi kwamadivayisi amabili. Amadivayisi angatholakala noma yikuphi emhlabeni, njengoba izingcezu zithunyelwa nge-Intanethi. Umkhawulo owodwa ukuthi i-snippet yekhodi eyodwa 'ingadonswa' futhi 'ixhunywe' ngasikhathi, yize ingadonswa kusuka kudivayisi eyodwa futhi itholwe kunoma iyiphi inombolo yamadivayisi. Asikho isixazululo esifanayo sokuthumela amafayela, ikakhulukazi okulula ukuthumela amafayela phakathi kwe-Mac ne-Android, futhi okungangabazeki ukuthi kuzodingeka asebenzise izinsizakalo ezifana eyinqolobane akhona kuzingxenyekazi eziningi.
Sethemba ukuthi lokhu kuzogcina i-imeyili yakho ingenazo izinto ezikhona ngoba bekufanele uzithumele ngokwakho futhi awunaso isitoreji esikhiphekayo onaso ukuze uzikopishe. Ngokuphathelene nokuthumela amafayela noma umbhalo phakathi kwamadivayisi we-Mac ne-IOS, kunenombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza ezenza lula. Ukuthumela amafayela noma umbhalo ekushodeni kwamapulatifomu e-Apple, kuzodingeka uncike kusevisi yewebhu. Inqubo izoba bushelelezi njengoba nezicelo zamapulatifomu aqondene nazo uqobo.
Umthombo - Amathiphu wokulutha
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izindlela ezinhle zokuthumela amafayela wombhalo bese wabelana kusuka ku-Mac yakho uye kwamanye amadivayisi
Ukubuyekezwa kweSniper Elite V2
I-jetAudio iletha ukudlala komculo okunamandla nokwenziwe ngokwezifiso ku-Android